कपाल रंगाउनु हुन्छ ? यस्तो खतरा हुनसक्छ ! - IAUA
कपाल रंगाउनु हुन्छ ? यस्तो खतरा हुनसक्छ !
युवापिंडी आफ्नो कपालमा थरीथरीका कलरहरु लगाएर अरु भन्दा फरक देखिन चाहन्छन् । उनीहरु समय समयमा हेयर कलर पनि फेरिरहने गर्दछन् । तर यसरी कपालमा थरीथरीका रंग लगाउनु स्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुनसक्छ । अमेरिकामा भएको एक अनुसन्धानले कपालको कलर गर्ने खासगरी महिलाहरुमा घातक रोगको खतरा बढ्ने देखाएको छ ।
एजेन्सीको सहयोगमा ।nepaljournal
Previous Previous post: कम्प्युटर प्रयोग गर्दा ‘सनस्क्रिन’ प्रयोग गर्नुहोस्ः नत्र हुनसक्छ यस्तो खतरा
Next Next post: तामाको भाँडोमा राखिएको पानी पिउँदा के फार्इदा ?